कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ हजार नाघ्यो ! – Sagarmatha Online News Portal
कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६ हजार नाघ्यो !
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को महामारीबाट संसारभर ६ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कारोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म ६ हजार ६९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेहरु चीनमा सबैभन्दा बढी रहेका छन् । चीनमा हालसम्म ३ हजार १ सय ९९ जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन्, भने ८० हजार भन्दा बढी अझैसम्म संक्रमित भएका छन् ।
चीनपछि सबैभन्दा धेरै इटालीमा हालसम्म २१ हजार १ सय ५७ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकोमा १ हजार ४ सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनको तुलनामा इटालीमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर पनि उच्च रहेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । इटाली सरकारले पुरै देशलाई ‘लकडाउन’ गरेर ६ करोड नागरिकलाई सेल्फ क्यारेन्टाइनमा राखेको छ ।
यस्तै इरानमा पनि कोरोनाको असर उच्च देखिएको छ । १३ हजार ९ सय ३८ जना कोरोनाबाट संक्रमित भएकोमा ७ सय २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । चीनमा भने पछिल्लो समय कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चीनमा कोरोनाका केवल २५ नयाँ बिरामी फेला परेका छन् भने १० जनाले मात्रै ज्यान गुमाएका छन् । तर चीन बाहिर भने कोरोनाको प्रकोप भयावह देखिएको छ । विशेष गरी युरोपेली मुलुकहरु कोरोनाको महामारीबाट प्रभावित भएका छन् ।
चीन, इटाली र इरानपछि कोरोनाको सबैभन्दा बढी प्रभाव देखिएको देश कोरिया हो । कोरियामा हालसम्म ८ हजार १ सय ६२ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपनि मृत्यु दर भने अन्य देशको भन्दा कम देखिएको छ । कोरियामा हालसम्म ७५ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै स्पेनमा २ सय ९१, जर्मनीमा ११, फ्रान्समा ९१, अमेरिकामा ६०, स्वीट्जरल्याण्डमा १४, बेलायतमा २१ र नेदरल्याण्डमा २० जनाले कारोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म विश्वभर १ लाख ६२ हजार ७ सय जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये करिब आधा चीनका नागरिक छन् । नेपालमा हालसम्म एक जनामा मात्रै कोरोनाको संक्रमण देखिए पुष्टि भएपनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने कोरोनाको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । हालसम्म भारतमा १ सय ८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टी भएको छ भने २ जनाको मृत्यु भएको छ ।